သြစတေးလျတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဒုတိယသြစတေးလျလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၁၆) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
comments: လူအများစုကဤလေ့လာမှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကြီးလေးသောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုထောက်ခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လိုလားတဲ့ porn ထောက်ခံသူမဟုတ်မမှန်ပြည်နယ်များ သင်တန်းသားများကိုသာ 2% ကြောင်း porn ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ခံစားခဲ့ရကြောင်း။ အမှန်မှာ၊ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၃၀ ကြားရှိယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ၁၇% သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။
သို့သော်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၃၀ ကြားရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည် မဟုတ် သေးငယ်တဲ့လူနည်းစု။ လေ့လာမှုမှာစားပွဲတင်5အဆိုအရဒီအသက်အရွယ်အုပ်စု 17% ညစ်ညမ်းသုံးပြီးသူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်. (မတူဘဲ, လူတွေ 60-69 ကြားတွင်သာ 7.2% အတွေး porn မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ )
J ကိုလိင် Res ။ 2016 ဇူလိုင် 15: 1-14 ။
Rissel C1, ရစ်ချတာ J2, Visser က de RO3, McKee A4, Yeung A2, Caruana T2.
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းအားထိတွေ့သူများအကြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်။ သို့သော်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပညာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သြစတြေးလျားရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းကကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုဖော်ပြသည်။ သြစတြေးလျ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာဒုတိယလေ့လာမှု (ASHR12) မှအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသောတယ်လီဖုန်းဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (CASIs) ကိုsampleစတြေးလျပြည်နယ်များနှင့်နယ်မြေများမှအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၆၉ နှစ်အတွင်းရှိအသက် ၉၉၉၆၃ ယောက်ျား၊ 2% ၏ပါဝင်မှုနှုန်းသည်။ အမျိုးသားအများစု (၈၄%) နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဝက် (၅၄%) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ခါမျှကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသည်။ ဤအမျိုးသားများ၏လေးပုံသုံးပုံ (၇၆ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့်ထိုအထဲမှသုံးပုံတစ်ပုံကျော် (၄၁%) သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူအနည်းငယ်က၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ (ယောက်ျား ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီး ၁ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့်စွဲသည်ဟုဆိုသူများ၏တစ်ဝက်ခန့်သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုစွဲလမ်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သြစတြေးလျတွင်လူအများစုကဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။